Ukukhupha izixhobo zedayimani yokukhangela nge-RF ephathekayo yokufudumala
Ikhaya / izicelo / Ukukhangela ibhola / Izixhobo zeBrazil zeDayimani ngoKwenziwa
Udidi: Ukukhangela ibhola tags: idayimani ebomvu, izixhobo zedayimane, izixhobo zokusebenza kwidayimani, izixhobo zokusebenza kwedayimane, iidayimani eziphakamileyo ezigqumayo, ukufunyanwa kwedayimane yedayimane
I-Brazing Diamond Tools I-Induction Heating Equipment Brazing
Induction uBrazing yeyona ndlela inokuthenjwa yokujoyina idayimani kwisinyithi. Ikwayindawo esetyenziswa kakhulu kwaye yenye yeendawo apho iinkqubo zibanjwa njengeemfihlo zorhwebo kwiinkampani ezininzi. Eli phepha lizama ukubonelela ngesishwankathelo ngokubanzi sedayimani yokuhombisa, kunye nesishwankathelo sezixhobo ezisandula ukwenziwa ezisetyenziselwa ukubethela izinto.
I-Induction Brazing yindlela yokudibanisa iziqwenga ezibini ngokudibeneyo usebenzisa isinyithi sesithathu, esenziwe ngentsimbi esinyibilikisiweyo. Indawo edibeneyo ishushu ngaphezulu kwendawo yokunyibilikisa i-braze alloy kodwa ingezantsi kwendawo yokunyibilika kwezinto ezihlanganisiweyo; i-alloy bronze alloy ihamba phakathi kwezezinye izinto ezimbini nge-capillary action kwaye yenza ibhondi eqinile njengoko ipholile. Ngokwesiqhelo xa ujoyina isinyithi, ibhondi yokusasazeka iyenziwa phakathi kweesinyithi ezimbini ekufuneka zidityanisiwe kunye ne-braze alloy.
Kuzo zonke iindlela ezifumanekayo zetsimbi,ukukhangela ibhondi inokuba yeyona nto ibhetyebhetye. Amalungu eBrazed anamandla amakhulu - ahlala omelele kunezi zimbini zentsimbi zidityaniswe kunye. Amacandelo amaBrazed Induction gxotha kwakhona igesi kunye nolwelo, ukumelana nentshukumo kunye nokothuka kwaye akuchaphazelwa lutshintsho oluqhelekileyo kubushushu. Ngenxa yokuba isinyithi esidityanisiweyo asizinyibilikisi, aziphoswanga okanye zigqwethwe ngenye indlela kwaye zigcine iimpawu zentsimbi zentsimbi.
Inkqubo ilungele ukujoyina izinyithi ezingafaniyo, enika umyili wendibano ukhetho oluninzi lwezinto. Iindibano ezintsonkothileyo zinokwenziwa ngokwamanqanaba ngokusebenzisa izixhobo zokufaka isinyithi kunye neendawo ezinyibilikayo ezisezantsi ngokuthe chu. Ukongeza, i-alloy alloy inokukhethwa ukuba ihlawulele ukwanda okwaneleyo kokuqina kokungalingani phakathi kwezixhobo ezibini. I-Brazing iyakhawuleza kwaye iyonga, ifuna amaqondo obushushu asezantsi kwaye iyakwazi ukuziqhelanisa nokuzenzekelayo kunye namanyathelo okuvelisa angatyekanga.
Ukukhangela ibhola wedayimani ukuya kwimigca esinyithi yahluke kakhulu kubhontsi wokujoyina isinyithi. Esikhundleni sokuthembela kwisenzo se-capillary kunye ne-bond diffusion, i-brazing yedayimane ixhomekeke ekuphenduleni kwamakhemikhali.
Iitanki zensimbi zeBrazil kunye ne-Induction